“Ku soo laabashada Neymar Jr ee Barcelona uma sahlanaan doonto Valverde” – Ancelotti – Gool FM
(Yurub) 10 Agoosto 2019. Tababaraha kooxda kubadda cagta Napoli ee Carlo Ancelotti ayaa ka hadlay suurtogalnimada uu xiddiga reer Brazil ee Neymar Jr uu ugu dhaqaaqi karo Barcelona suuqan xagaaga.
Carlo Ancelotti ayaa dhinaca kale Tilmaamay in imaatinka Neymar Jr ee garoonka Camp Nou ay dhibaato u keeni karto tababare Ernesto Valverde.
Xiddiga reer Brazil ayaa si weyn lala xiriirinayay xagaagan inuu ka tagayo Paris Saint-Germain, maadaama uu xumaaday xiriirka kala dhexeeyay maamulka kooxda, iyadoo sidoo kale ay jiraan warar la xiriirinaya inuu u dhaqaaqayo Barcelona ama Real Madrid.
Wargeyska “Marca” ee dalka Spain ayaa shaaca ka qaaday wareysi uu Carlo Ancelotti kaga hadlay wararka la xiriirinaya Neymar inuu ku biirayo Barcelona waxaana hadaladiisa ka mid ahaa:
“Hadii Neymar uu yimaado Barcelona, ​​uma fududaan doonto tababare Ernesto Valverde inuu xusho shaxda kooxda, laakiin waxaan u malaynayaa in Valverde uu leeyahay awooda uu ku maamuli karo, sababtoo ah wuxuu sidaas ku sameeyay xiliyadii lasoo dhaafay”.
“Waxaan aaminsanahay in kooxda ay guuleysan doonto, kuma xirna hal ciyaaryahan, waana muhiim in ciyaartoyda oo dhami ay ogaadaan sida loo wada shaqeeyo”.